Kurume 2018 | Save A Train
Mwedzi: Kurume 2018
musha > Kurume 2018
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Nei UK Train atasve mitengo saka yakakwirira? UK Train tasva mitengo zvakakura yakakwirira. Europe anonzi kuti yakanaka chitima nzendo munyika. zvakatipoteredza noushamwari chitima nzendo mu Europe ine nzvimbo dzokuona dzakanaka. Dzidzisai vanhu kuwana kwose kwose vachibva kure nemisha kuti…
Sei Train Ride Yakanakisisa Way To See Italy
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Une mitoro zvaungasarudza kana wafunga sei kufamba. Kufanana zita yakakurumbira firimu, unogona kuenda Via ndege, nezvitima, uye nemotokari. Kana totaura achitora tichiona Italy, zvisinei – pane zvimwe zvinhu zvekuenda nazvo…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Kuenda Europe nechitima ndechimwe chezvinhu yakanaka, yevedza, uye nzendo dzetsika munyika. Ungave uchitsvaga zvakananga nezvitima pakati pemaguta makuru European akafanana itsva London kuna Amsterdam chitima kana muchitsvaka uchidanana chitima nzendo, European chitima…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Italy arguably ane mukuru kofi tsika panyika. nyika yokutanga European kupinza kofi kubva muIjipiti, Italy akaita vakabudirira cafes kubvira rechi16 Century, uye nhasi tichaita mazano pamusoro 5 zvinoshamisa kofi zvitoro pedyo chitima nenhepfenyuro muItaly. nyaya iyi…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Chii chichakubatsira kukukurudzira kuti kutora chitima rwendo kupfuura kuona inonakidza Movies dzine Zvitima? Tora Kutarira kwedu pasi yakanakisisa Movies dzine Zvitima, uye tweet isu pa @saveatrain uye utiudze kuti ndeapi awakaona uye kana waida…